ပြခန်း Vault - ရုပ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများ Hide | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » လုံခြုံရေး & သီးသန့်လုံခြုံရေး Apps ကပ » ပြခန်း Vault - ရုပ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများ Hide
ပြခန်း Vault - ရုပ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများ Hide APK ကို
GalleryVault အလွယ်တကူသင်၏ဓါတ်ပုံများဖုံးကွယ်နဲ့စာဝှက်ရန်စိတ်ကူး privacy ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက် App ဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုများနှင့်သင် see.GalleryVault တခြားသူတွေချင်ကြပါဘူးအခြားဖိုင်တွေက၎င်း၏ app ကို icon ကိုဖုံးကွယ်ခြင်းနှင့်လုံးဝလုံခြုံသင့်ရဲ့ privacy ကိုထိန်းထားနိုင်တယ်။ သင်ဤလုံခြုံ Vault ၌သင်တို့၏ပုဂ္ဂလိကပုံရိပ်တွေနှင့်ဗီဒီယိုများကိုတင်သွင်းနိုင်ပြီး, ဘယ်သူမှ၏တည်ရှိမှုသိတယ်။
ပိုပြီးင်ကဘာလဲ, GalleryVault လှပတဲ့ဒီဇိုင်းရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်သင်ကချောချောမွေ့မွေ့နဲ့အံ့သြဖွယ်မီဒီယာ browse အတွေ့အကြုံကိုပေးစွမ်းသည်။
ပြခန်း Vault အသုံးပြု. ပုဂ္ဂလိကအပိုင်း၌သင်တို့၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဓါတ်ပုံတွေကိုထားပါ။ ဒီ app ကသင့်ရဲ့ smartphone အားလုံးကိုသင့်မီဒီယာဖိုင်တွေကိုကာကွယ်ပေးသည်။ ဒါဟာအစပြုချက်မရှိဘဲသို့မဟုတ်မလိုချင်တဲ့ access ကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့အားလုံးသင်၏ဖိုင်များကိုစာဝှက်ပေးတယ်။ သင်တို့သည်လည်းဝှက်ထားသောဒီ app ကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။ ဒါကြောင့်အဘယ်သူမျှမအစဉ်အဆက်ဒီ app ကိုတောင်မှသင့်ရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာတည်ရှိသိကြပါလိမ့်မယ်။
အချို့ကိစ္စများတွင်ပြခန်း Vault မဖွင့်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘက်ပေါင်းစုံမိုဘိုင်းဘရောက်ဇာကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့အသုံးပြုသူများအတွက်အကြံပြုသည်။ System ကိုပြင်ဆင်မှုအားအတွက်ပြခန်း Vault အတွက် browser ကိုစာမျက်နှာသို့သွားရောက်လည်ပတ်ရန် "အာကာသစီမံခန့်ခွဲရန်" ကိုနှိပ်ပါ။ ထိုအခါ '' Apps ကပ 'ခလုတ်ကိုထိပုတ်ပါနှင့်ပြခန်း Vault ကိုဖွင့်။ ဒါဟာသင်မေ့အမှု၌ပျောက်ဆုံးစကားဝှက်ကိုပြန်လည်ဖေါ်ထုတ်ရန်အကာအကွယ်အစီအမံများရှိပါတယ်။ အဆိုပါ search bar ပေါ်တွင် '' Thinkyeah '' ရိုက်ပါနှင့် password ကို reset ဖို့ခြေလှမ်းလိုက်နာပါ။
ဒါဟာအထူးသဖြင့်ပုဂ္ဂလိကမိမိတို့၏မီဒီယာဖိုင်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်ရှိသည်သောသူတို့အဘို့, ဖြစ်ကောင်းပြခန်း Vault ၏အရေးအပါဆုံး feature တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကကိုယ်ပိုင် Vault မှာသူတို့ကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။ ဤနည်းကိုသင်အလွယ်တကူမလိုချင်တဲ့ element တွေကိုတားဆီးများနှင့်အရေးကြီးသောအရာတစုံတခုကိုမျှဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်။
access network သတင်းအချက်အလက်များ
external storage Read / Write
အိပ်ပျော်နေတဲ့ထံမှအလင်းမှိန်ခြင်းသို့မဟုတ် Processor ကိုကနေမျက်နှာပြင်စောင့်ရှောက်
vibrator ဖို့ Access ကို
Launcher ကိုတစ်ခုဖြတ်လမ်း Add
Access ကို Wi-Fi ကွန်ယက်သတင်းအချက်အလက်
စာရွက်စာတမ်းများမှ Access ကို
packages များ Installing
ပြောင်းလဲမှုကို Wi-Fi ကိုဆက်သွယ်မှု
စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ features တွေ:
•, ဓါတ်ပုံများ Hide ဗီဒီယိုများဖုံးကွယ်ခြင်းနှင့်ဖိုင်များကိုမဆိုအခြားအမျိုးအစားများကိုဖုံးကွယ်
•ယင်းက hidden file တွေကိုအားလုံး encrypt လုပ်ထားများမှာ
•ပံ့ပိုးမှုအိုင်ကွန်ပုန်းအောင်း, အဘယ်သူမျှမသင် မှလွဲ. ပြခန်း Vault ၏တည်ရှိမှုသိတယ်။
•ပံ့ပိုးမှု SD ကဒ်ထဲမှာဖိုင်တွေပုန်းအောင်းနှင့် Android 4.4 (KitKat ကို), 5.0 (Lollipop), 6.0 (Marshmallow) နှင့် 7.0 (Nougat) + အပါအဝင်သင့်ရဲ့ device ကိုသိမ်းဆည်းခြင်း, ကယ်ဖို့ SD ကဒ်မှစာဝှက်ထားတဲ့ဖိုင်တွေကိုပြောင်းရွှေ့။
•အလျင်ပြခန်း Vault ပိတ်ဖို့ရန်သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုလှုပ်ခါပါ
•ပံ့ပိုးမှု GIF ကိုပုံရိပ်များပုန်းအောင်းနှင့်ကစားခြင်း
•ပံ့ပိုးမှုလူငယ်များသို့-In သတိပေးချက်များနှင့် Break-အတွက်ကြိုးစားနေသောသူသိပါ
•ပံ့ပိုးမှုအတု passcode နှင့်အခါသင် input ကိုအတုပတ်စ်ကုတ်အတုအကြောင်းအရာကိုပြသ
•ပံ့ပိုးမှုလက်ဗွေ (သာလျှင်လက်ဗွေစကင်နာများနှင့် samsung device ကိုထောကျပံ့ပေး)
GalleryVault နှင့်အတူ, သင့်ရဲ့ privacy ကိုကောင်းစွာကာကွယ်ထားသည်။
ဒီ app ကိရိယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးခွင့်ပြုချက်ကိုအသုံးပြုသည်။ SD ကဒ်အသုံးပြုသူများကိုဖယ်ရှားရန်နေဖြင့်ဒေတာများဆုံးရှုံးခြင်းမှကာကွယ်ရန်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ GalleryVault သင့်ရဲ့ device ကိုမှမဆိုအပြောင်းအလဲလုပ်ဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။
----- အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ -----
ငါဖုန်းခေါ်ထံမှ GalleryVault ကိုဖွင့်ရန်ပျက်ကွက်လျှင်ငါသည်အဘယ်သို့ပြုနိုင်သနည်း
ပြခန်း Vault စနစ်ကသို့မဟုတ်အခြား app များကိုသတ်ဖြတ်, ဒါမှမဟုတ်စက်ကိုအပြီးပြန်လည်စတင်ပြီးနောက်တစ်ခါတစ်ရံအချို့ Device များအတွက်, ပြခန်း Vault ဖြစ်ရပ် dial တုံ့ပြန်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ထိုကိစ္စတွင်, သင်အောက်ပါနည်းလမ်းများထဲမှကွိုးစားနိုင်သည်
1 ။ http://open.thinkyeah.com/gv: ဤစာမျက်နှာသို့သွားရောက်လည်ပတ်ဖို့ built-in browser ကိုသင့်ရဲ့ device ကိုအသုံးပြုပါ။
2 ။ ပြခန်း Vault (System ကို Setting-> Apps-> GalleryVault) ၏စနစ် App ကိုအသေးစိတ်အင်ဖိုစာမျက်နှာရှိ "အာကာသစီမံခန့်ခွဲရန်" ခလုတ်ကိုထိပုတ်ပါ
keyword ကိုရှာဖွေခြင်းဖြင့် (ငါတို့သည်သင်တို့မှပေးပို့နောက်ဆုံးပေါ်မေးလ်ကိုရှာဖွေပေးပါ thinkyeah သင်၏မေးလ်သေတ္တာ) မှာ, သင်၏ပတ်စ်ကုတ်ကို reset ဖို့မေးလ်ထဲမှာခြေလှမ်းများလိုက်နာပါ။
1 ။ ပြခန်း Vault စာမျက်နှာသော့ခတ်စတင်ရန်။
သင့်ရဲ့ icon ကိုဝှက်ထားသောဖြစ်လျှင်, ပြခန်း Vault (System ကို Setting-> Apps-> GalleryVault) ၏စနစ် App ကိုအသေးစိတ်အင်ဖိုစာမျက်နှာရှိ "အာကာသစီမံခန့်ခွဲရန်" ခလုတ်ကိုထိပုတ်ပါ။
2 ။ သော့ဖွင့်ခြင်းနှင့်2ကြိမ်ကျရှုံး, ထို့နောက်တစ်ဦးမေ့ button ကိုပြသပါလိမ့်မယ်ကြိုးစားပါ။
3 ။ "မေ့" ခလုတ်ကိုနှင့်ဒိုင်ယာလော့ခ်ထဲမှာ "ပြန်ပို့ရန် Auth အီးမေးလ်" ခလုတ်ကိုထိပုတ်ပါကိုထိပုတ်ပါ။
ပိုပြီးအသေးစိတ်အတွက်မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများသွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး: support.thinkyeah.com/posts ။
GalleryVault ဘို့မဆိုပြဿနာများကိုသို့မဟုတ်အကြံပြုချက်ကိုမေးလ်ပေးပို့မှကြိုဆိုပါ၏! GalleryVault@thinkyeah.com
ကျနော်တို့သီးသန့်လုံခြုံရေး, ကာကွယ်ပါဟာပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဝှက်ရုပ်ပုံသည်နှင့်သင့် privacy ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ဗီဒီယို app ကို Hide အာရုံစိုက်!
အင်္ဂလိပ်, ရုရှား, စပိန်, ပြင်သစ်, ဂျပန်, ကိုးရီးယား, အင်ဒိုနီးရှား, ဂျာမန်, ဗီယက်နမ်, အီတလီ, ထိုင်း, အာရဗစ်, ဟိန္ဒူ, မျက်မှောက်ရေးရာတရုတ်, ရိုးရာတရုတ်။
1 ။ folder ကိုသော့ခတ် Add
2 ။ ဗီဒီယိုကိုကစားသောအခါညှိတောက်ပထောကျပံ့
ပြခန်း Vault - ရုပ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများ Hide
8.54 ကို MB
ပြခန်း Vault ပြခန်း Vault APK ကို Android အတွက်ပြခန်း Vault Locker တွေ မာလ်တီမီဒီယာ
vishal Sing says:
ဒီဇင်ဘာလတွင် 18, 2016 မှာ 12: 38 ညနေ
ဧပြီလ 12, 2016 မှာ 3: 30 ညနေ
ငါ problm ရှိသည်။ ငါပြခန်း Vault ငါ့ဓါတ်ပုံပဲကယ်တင်ယခုမူကားထိုသို့ပြုမှ, ငါ့ဓါတ်ပုံ wt ဖေါ်ပြခြင်းမဟုတ်အလုပ်လုပ်မဟုတ်ပါ
စက်တင်ဘာလ 6, 2016 မှာ 9: 03 ညနေ
ငါ NQ Vault ငါ့ pic ကိုဖွင့်မကယ်ပေမယ့်အခုကိုယ့်ဘယ်မှာငါ၏အ pic ကို plzz ငါ့ကိုကူညီဖို့ဖြစ်ပါတယ်သိရပါဘူးငါ့အ pic ကိုဖေါ်ပြခြင်းမဟုတ်ပါ
Tamanna ဘရာစီယာ says:
ဧပြီလ 3, 2017 မှာ 11: 49 နံနက်
Hai က pls app ကို uninstall frnd ... ။ ထိုအ reinstall ...
တူညီတဲ့ဗားရှင်း app ကို ... ။
အဟောင်း valut passwsrd
တူညီတဲ့ passward Give ... ၎င်း၏အလုပ်ကိုသင်ကဓါတ်ပုံ seeibg ပြခန်း valut App ဖြစ်ပါတယ်
mithun နဂါး says:
ဧပြီလ 3, 2016 မှာ 8: 09 ညနေ
မတ်လ 15, 2016 မှာ 1: 08 နံနက်
အလွန်ကောင်းသော apps များ
စက်တင်ဘာလ 26, 2015 မှာ 6: 33 နံနက်
စက်တင်ဘာလ 4, 2015 မှာ 8: 56 ညနေ
မေလ 8, 2015 မှာ 10: 12 ညနေ
ဤသည်မိုဘိုင်းနှင့် privacy ကိုများအတွက်အလွန်အရေးကြီးပါသည်
ဇန်နဝါရီလ 20, 2015 မှာ 12: 14 နံနက်
ဓာတ်ပုံ & ဗီဒီယိုများဖုံးကွယ်
ဒီဇင်ဘာလတွင် 31, 2014 မှာ 7: 44 ညနေ
pls ... ကြောင့်မှားယွင်းမှုတစ်ခုဖေါ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ် ... မကြာမှီကပြောင်းလဲမှုများ FILE မအောင်မြင်ခဲ့ပါ ... ဘာလုပ်ဖို့ကူညီပေးပါ။
နေသာ Sharma says:
ဒီဇင်ဘာလတွင် 8, 2014 မှာ 10: 16 နံနက်
ကျွန်တော်ဒီ app ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုနှင့်မိတ်ဆွေများမှအချို့သောပုဂ္ဂိုလ်ရေး pics ကာကွယ်ပေးကြ bcoz အလွန်ကောင်းသောယင်း၏အံ့သြဖွယ် apps ။ လှပသော
။ ဂျေဟတ် says:
အောက်တိုဘာလ 6, 2014 မှာ 4: 06 နံနက်
subhendu Kumar mondal says:
အောက်တိုဘာလ 4, 2014 မှာ 11: 09 ညနေ
သြဂုတ်လ 25, 2014 မှာ 4: 14 ညနေ
သြဂုတ်လ 18, 2014 မှာ 9: 51 နံနက်
1 ပိုပြီးအရာဆိုလိုသည်မှာ "အောက်က Installer ချင်တိုင်အောင်ဖြုတ်ခံရမနိုငျသော Feature ကို Add ..
သြဂုတ်လ 18, 2014 မှာ 9: 46 နံနက်
Plz ။ ဦး '' ဌအထက်ပါဖော်ပြခဲ့တဲ့ feature ကိုတိုးတက်စေလိုလျှင်ငါ5ကြယ်ပွင့်ပေးလိမ့်မယ် bt i'l4ထဲက5ပေး ... အသံဖိုင်တွေကို add လည်း ex- MX player ကိုသို့မဟုတ်အခြားအခြားကစားသမားမှတဆင့်ကစားရန်တစ်ဦးအင်္ဂါရပ် Add ။ , ကျေးဇူးတင်စကား
သြဂုတ်လ 15, 2014 မှာ 7: 37 ညနေ
ငါ installed နှင့်ယခုငါ app ကိုဖွင့်လှစ်ဖို့ဘယ်လိုမေ့ pics ကဆက်ပြောသည်။ ကူညီ ကျေးဇူးပြု.
Rajkumar Bhar says:
သြဂုတ်လ 9, 2014 မှာ 9: 03 ညနေ
အလွန်ကောင်းသော app ကိုငါမူကားဤသူ plse ငါ့ကိုကူညီဒေါင်းလုတ်လုပ်အတွက်မရှိမဖြစ်
ဇူလိုင်လ 8, 2014 မှာ 6: 10 ညနေ
မေလ 6, 2014 မှာ 7: 58 ညနေ
ဧပြီလ 25, 2014 မှာ 11: 10 နံနက်
ကြောက်မက်ဘွယ် app ကို
ဧပြီလ 25, 2014 မှာ 11: 05 နံနက်
awsome app ကို
နိုဝင်ဘာလ 24, 2013 မှာ 2: 40 ညနေ
ဒီ app ကိုကိုယ့်ပိုကောင်းဘာမှအဘို့မမေးနိုင်, ကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်ပါသည်။ လက်မထောင်ပြခြင်း
ko နောင် says:
သြဂုတ်လ 9, 2013 မှာ 7: 41 ညနေ
Md ။ Saiful အစ္စလာမ်ဘာသာ says:
ဇူလိုင်လ 25, 2013 မှာ 3: 12 နံနက်
cant download, အကတချို့မလိုအပ်တဲ့ code ကိုပြသသည်။
ဇူလိုင်လ 25, 2013 မှာ 4: 35 ညနေ
အချို့သောကွဲပြားခြားနားသောဘရောက်ဇာကိုသုံးပါသို့မဟုတ်ညာဘက်ဒေါင်းလုဒ်ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါနှင့် "ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန် Link ကိုအမျှ" ကိုရွေးချယ်ပါသို့မဟုတ် option ကို "ပစ်မှတ်အဖြစ် Save" ။
မေလ 1, 2013 မှာ 7: 11 ညနေ
Usfull site ကို